Virus Alert = Beenta wanaagsan - Rikoooo
Virus Alert = Beenta wanaagsan
Xubno tiro yar ayaa soo gudbiyay fayruus ama hanjabaadyo sida filter "Smart Screen - barnaamijkan wuxuu dhaawici karaa kombuyutarkaaga" iyo digniino kale oo faylasha ah.
HA KU HANI KARTO AAN IS A CALAAMADAHA WAQTIGA AH
Waxaan sameynay baaritaan dheer oo ku saabsan arrintan, oo la baaro oo lagu baaro dhamaan feylasha bogga dhowr jeer fayruska ka hortagga ah barnaamijyada mana helin wax, faylasha oo dhan waa nadiif ah.
Mararka qaarkood silsilado barnaamijyadooda leeyihiin flanges geynta mid ah barnaamij caafimaad sida barnaamijka viral.
Sidaas awgeed tan waxaa loo yaqaan 'positive positive', si kale haddii loo dhigo, fayruska anti-virus wuxuu khalad sameeyaa, waxay aaminsan tahay in la aqoonsado saxiix. WAA BADAN KA BADAN TAHAY IN AAD KA QABTO ...
Cusboonaysii software-kaaga anti-virus! Arrintani waxay xallin kartaa isbeddel cusub kadib. Ka fogow Norton Antivirus iyo avast kuwaas oo ku xiran heer aad u sarreeya oo been ah.
Isticmaal fayraska ka hortagga fayruuska ee aan awood u lahayn, waxaan soo jeedinaynaa BitDefender laakiin waxaa jira dad kale oo badan.
Haddii aadan dooneynin inaad wax ka bedesho fayraska ka-hortagga, waxaad si fudud u baabi'in kartaa waqtiga aad ku soo dejisan lahayd oo aad ku rakibi lahayd add-ons.